Cameroon: choputa ngwa ihe eji eme ihe, ma di egwu; ịchọrọ mkpọchi 100% Organic? Ya mere, egbula oge, naanị gaa Cameroon; "Na Cameroon, ndị nwe ụgbọala na ụgbọ ala ndị ọzọ na-ahapụ ha n'èzí, mana na-eju anya, ị ga-ahụkarị okirikiri a na-acha ọcha ntụ ntụ."
Site na: KongoLisolona: July 10, 2020 08: 00 Enweghị asịsa
Ugbo a bụ ihe eji eme ihe na ihe ọzọ. Ọ bụ ụdị ụjọ. "Ọ bụrụ na ị daafere ntụ ntụ ọcha a, mgbe ahụ ọ dị ka ị gafere ahịrị uhie ...	GỤKWUO
Ọrụ dị iche iche icheta: ndị isi ojii / ndị isi Africa anyị hụrụ n'anya, gụnyere ndị egwu, ndị egwuregwu, ndị ọrụ egwuregwu, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ozuzu aturu (…) KongoLisolo Ọ ga-amasị m ichetara gị na ọnọdụ mmekọrịta gị na-enyefe gị ọrụ na ọrụ maka ọha ndị isi ojii / ndị Africa karịsịa ndị ntorobịa ya ”
Site na: KongoLisolona: Mee 31, 2020 07: 07 Enweghị asịsa
Maka nke a, omume gị, ọkachasị ndị ọha, nke na-akpali ọha mmadụ a, agaghị emegide omenala na agbụrụ Black / Africa. N'oge na-adịbeghị anya, anyị ebipụtala ...	GỤKWUO
Cameroon: Septemba 13, 1958, ụbọchị Lamberton na Um Nyobe zutere, lee foto dị n'okpuru "Ọ bụ otu n'ime peeji ndị kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme nke Cameroon"
Site na: KongoLisolona: Mee 21, 2020 06: 08 Enweghị asịsa
Anyị hụrụ, na nke mbụ, n'egedege ihu, na ikuku, na Zopac n'ọdụ ụgbọ mmiri Sanaga, na Septemba 13, 1958, Colonel Lamberton nwere aha ọjọọ, nke usoro ama ama…	GỤKWUO
Cameroon: na ncheta nke Ernest Ouandie "Onweghi onye nwere ikike iwepu peeji nke akụkọ banyere ndị mmadụ, n'ihi na ndị na-enweghị akụkọ ntolite bụ ụwa nke na-enweghị mkpụrụ obi" Ernest Ouandie, onye ọrụ ebere ikpeazụ nke Cameroonian Ntughari megide ndozi ochichi nke 60s, nke France gburu ya na Jenụwarị 15, 1971… (VIDIO)
Site na: Admi1na: Mee 21, 2020 03: 03 Enweghị asịsa
Ọrụ dị iche iche icheta: Ernest Ouandié na-ekwu maka ọnwụ Félix Moumie, n'oge osote onye isi UPC kwuru na ikuku nke RTS banyere ọnwụ Félix Moum…	GỤKWUO
Maka ndị ọ bụla, ọdịbendị ya, ọnọdụ ime mmụọ ya na "chi" ya: onye Juu bụ ekele nke ndị Juu; European bụ European ekele nke Iso ;zọ Kraịst; Arabic bụ Arabic ekele Islamism; Ndị China bụ ndị China ekele (…); onye India bụ onye India ekele (…) na mụ Koudjou, a bụ m Black / Kemet n'ihi ofufe nke ndị nna ochie m.
Site na: KongoLisolona: April 29, 2020 03: 00 Enweghị asịsa
Ee, a na m enye jujube, Cola, nnu, mmanu n ’okwu nna m ochie“ Ihe a bụ ihe m ji mara ”. Ọ bụ nzuzu dị ọcha ịrịọ m ka m kpee ekpere "A ...	GỤKWUO